Mgbazinye nke ohere azụmaahịa n'oge nsogbu Corona | Law & More B.V.
blog » Mgbazinye ohere nke azụmaahịa n'oge nsogbu corona
Mgbazinye ohere nke azụmaahịa n'oge nsogbu corona
Currentlywa dum na-enwe nsogbu ugbu a na-enweghị atụ. Nke a putara na gọọmentị ga-emerịrị usoro pụrụ iche. Ihe mbibi ọnọdụ a kpatara na ọ ga-aga n'ihu na-akpata nwere ike ịkarị oke. Nke bụ eziokwu bụ na onweghị onye nọ ugbu a iji nyochaa etu nsogbu ahụ siri dị, ma ọ bụ ogologo oge ọ ga-adịgide. N'agbanyeghị ọnọdụ ahụ, mgbazinye ụlọ ọrụ azụmahịa ka dị ire. Nke a na-ewelite ọtụtụ ajụjụ. N’isiokwu a, anyị ga-achọ ịza ajụjụ ole na ole nwere ike ibilite na ndị bi n’ụlọ ma ọ bụ ndị nwe ụlọ ebe azụmaahịa.
Paymentkwụ ụgwọ ụlọ
Still ka ga-akwụ ụgwọ ụlọ ahụ? Azịza nke ajụjụ a dabere n'ọnọdụ nke ikpe ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-amata ọnọdụ abụọ. Nke mbu, ebe ahia ahia nke apughi iji ya maka nzube aka ahia, dika ulo oriri na nri. Nke abuo, enwere ulo ahia enwere ike imeghe, mana ndi ahuru imechi onwe ha.
Onye nwe ụlọ ji ụgwọ ịgbazite dabere na nkwekọrịta ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ bụ ngabiga nkwekọrịta. Ugbu a ajụjụ na-ebilite, enwere ike ịbịakwasị ike? Eleghi anya enwere nkwekorita na nkwekorita nke ulo ihe banyere onodu nke ike aghaghi itinye. Ọ bụrụ na ọ bụghị, iwu metụtara. Iwu kwuru na enwere ike majeure ma ọ bụrụ na enweghị ike ịta onye nwe ụlọ ụta maka nnabata; n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụghị nsogbu onye nwe ụlọ na ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ. O doro anya ma ọdịda imezu ibu ọrụ n'ihi coronavirus na-ebute ike majeure. Ebe ọ bụ na enweghị ụkpụrụ maka nke a, o siri ike ikpebi ihe ga-esi na ya pụta. Otú ọ dị, ihe na-arụ ọrụ bụ nkwekọrịta ROZ (Real Estate Council) a na-ejikarị eme ihe n'ụdị mmekọrịta mgbazinye. N'ime nkwekọrịta a, a na-ewepụ azịza maka mbelata mgbazinye dị ka ọkọlọtọ. Ajụjụ a bụ ma onye nwe ụlọ nwere ike ịkwado echiche a n'ụzọ ezi uche dị na ya ugbu a.
Ọ bụrụ na onye ahụ bi n'ụlọ ga-ahọrọ imechi ụlọ ahịa ya, ọnọdụ ahụ ga-adị iche. Agbanyeghị, enwere ọrụ dịịrị ime ugbu a, nke bụ eziokwu bụ na ndị ọbịa erughị ya, yabụ uru dị ala. Ajụjụ a bụ ma onodu kwesịrị ịbụ kpam kpam na ndị na-akwụ ụgwọ. Ọ gaghị ekwe omume ịza ajụjụ a n'ụzọ doro anya n'ihi na ọnọdụ niile dị iche. A ga-enyocha ihe ndị a dabere na ikpe.
Ọnọdụ a na-atụghị anya ya
Ma onye obibi ma onye obibi ahụ nwere ike ịkpọ ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya. Na mkpokọta, nsogbu nsogbu akụ na ụba ga-aza ajụjụ maka onye ọchụnta ego, n'agbanyeghị na n'ọtụtụ oge nke a nwere ike ịdị iche n'ihi nsogbu corona. Enwere ike ịtụle usoro ndị gọọmentị mebere. Mkpesa sitere na ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya na-enye ohere ka emezigharị ịgbazite ma ọ bụ kagbuo ya. Nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị ike idowe onye na-akwụ ụgwọ ka ọ gaa n'ihu na nkwekọrịta ahụ. Dabere na akụkọ ihe mere eme nke omeiwu, onye ọka ikpe ga-emechi ihe a. Anyị nọkwa n'ọnọdụ ugbu a na ụlọ ikpe mechirikwa: ya mere na ọ gaghị adị mfe ịnweta mkpebi ozugbo.
Odighi ike na aku agbaziri agbaziri
Onye bi n'ụlọ ahụ nwere ike ịbelata mbelata ụlọ ma ọ bụ kwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ na ọ mezighi ihe. Mkpesa nke onodu nke ihe ulo ahu ma obu onodu obula ozo n’enwe enweghi nsogbu mgbazinye nke onye bi na ya kwesiri ka o bido na nkwekorita ulo. Iji maa atụ, enweghi ike nwere ike ịbụ: mmejọ ihe owuwu, ụlọ na-agbapụta mmiri, ebu na enweghị ike ịnweta ikike nrigbu n'ihi enweghị ọpụpụ ihe mberede. Generallylọ ikpe adịchaghị achọ ikpe ikpe na enwere ọnọdụ ga-abụrịrị maka akaụntụ onye nwe ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ahịa na-adịghị mma n'ihi enweghị ọhaneze abụghị ọnọdụ a ga-enyefe onye nwe ya ụlọ. Nke a bụ akụkụ nke ihe egwu achụmnta ego. Ihe ọzọ na-arụ bụ na n'ọtụtụ oge, enwere ike iji ihe ndị ịgbaziri agbazi. Ya mere, ụlọ oriri na ọ moreụ moreụ ndị ọzọ, na-ebuga ma ọ bụ na-eburu nri ha dị ka ihe ọzọ.
Imirikiti mgbazinye ụlọ ọrụ azụmaahịa gụnyere ọrụ ịrụ ọrụ. Nke a putara na onye nwe ulo aghaghi iji ulo ahia ndi ozo. Na ọnọdụ pụrụ iche, ibu ọrụ nke irigbu nwere ike ibilite na iwu, mana nke a abụghị mgbe niile. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nwe ụlọ niile nke ụlọ ọrụ na ọfịs na-eji ụdị ROZ. Ihe izugbe niile metụtara ụdị ROZ na-ekwu na onye nwe ụlọ ahụ ga-eji ohere mgbazinye ego "rụọ ọrụ nke ọma, n'ụzọ zuru oke, nke ọma na n'onwe". Nke a pụtara na onye nwe ụlọ ahụ ga-arụ ọrụ ọrụ ya.
Ruo ugbu a, enweghị ọkwa gọọmentị n'ozuzu ya na Netherlands nke nyere iwu imechi ebe ịzụ ahịa ma ọ bụ oghere ọfịs. Agbanyeghị, gọọmentị ekwuputala na ụlọ akwụkwọ niile, ụlọ oriri na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ ,ụ, ụlọ egwuregwu na ahụ ike, saunas, klọb mmekọahụ na ụlọ ahịa kọfị kwesịrị ịnọgide na-emechi mba niile ruo mgbe ngosi ga-eme. Ọ bụrụ na gọọmentị tiri iwu na-emechi onye mgbazinye ego, onye ahụ na-akwụ ụgwọ agaghị akpata ya. Nke a bụ ọnọdụ nke, dịka ọnọdụ mba dị ugbu a si dị, onye nwe ụlọ ekwesịghị ịnabata ajụjụ. N'okpuru usoro izugbe, onye ahụ na-akwụ ụgwọ na-agbaso iwu gọọmentị. Dị ka onye were ya n'ọrụ, iwu ji ya ịchọpụta ebe ọrụ na-adịghị mma. Ibu ọrụ a na-erite site na ekpugheghị ndị ọrụ n'ihe egwu nke ọrịa coronavirus. N'ọnọdụ ndị a, onye nwe ụlọ agaghị amanye onye bi n'ụlọ ahụ ka ọ rụọ ọrụ.
N'ihi nlekọta ahụike nke ndị ọrụ na / ma ọ bụ ndị ahịa, anyị na-ahụ na ndị bi n'ụlọ n'onwe ha na-ahọrọ iji aka ha mechie ihe mgbazinye, ọbụlagodi na gọọmentị enyeghị ha iwu ịme nke ahụ. N'ọnọdụ ugbu a, anyị kwenyere na ndị nwe ụlọ agaghị enwe ike ịgba akwụkwọ maka mmezu nke ọrụ ahụ, ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka mmebi. Site na ebumnuche ziri ezi na ịkwụwa aka ọtọ, yana ọrụ igbochi mmebi nke akụkụ nke onye bi n'ụlọ ya ka o kwere omume, ọ na-esiri anyị ike iche na onye nwe ụlọ ga-ajụ mmechi (obere oge).
Ihe dị iche iche eji eme ihe ndị ịgbaziri agbazi
Emechiri ụlọ oriri na ọ beụverageụ n'oge a. Ma, a ka nwere ikike iburu ma nyefee nri. Otú ọ dị, mgbazinye nkwekọrịta na-enye ọtụtụ oge iwu siri ike; ihe na-eme buru dị iche na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. N'ihi ya, onye nwe ụlọ nwere ike ime ihe megidere nkwekọrịta mgbazinye yana - ikekwe - tufuo Iwu.
N'ime ọnọdụ dị ugbu a, onye ọ bụla nwere ọrụ iji belata mmebi ya dịka o kwere omume. Site na ịgbanwee maka ọrụ iburu ma ọ bụ ebubata ya, onye na-akwụ ụgwọ na-ekwenye. N’okpuru ọnọdụ ndị a, o siri ike n’ezi echiche niile ịgbachitere echiche a na-emegide ebumnuche nkwekọrịta. N’ezie, onye nwe ụlọ nwere ike ịnwe onye nwe ụlọ ịgba akaebe ma ọ bụrụ na onye ahụ bi n’ụlọ ahụ anaghị eme ike ya niile iji mee ka azụmahịa ya na-aga n’ihu ka ọ nwee ike ịkwụ ụgwọ ụlọ.
N’aka ozo, iwu ji ndi mmadu igbanwe mmebi ha otu o kwere mee. Gọọmentị ekwupụtalarị usoro dị anya iji nyere ndị ọchụnta ego aka belata nrụgide ego ha. A na-atụ aro iji ohere nke usoro ndị a. Ọ bụrụ na onye bi n’ụlọ ahụ jụrụ ime nke a, enwere ike ịtụle inyefe onye nwe ụlọ ihe ndị funahụrụ ya. Nke a metụtakwara. Ka ọ dị ugbu a, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị akpọwokwa ndị nwe ala ka ha rụzie ụlọ mgbazinye na oge na-abịanụ, ka e wee kee ihe ahụ.
Agbanyeghi na onye nwe ulo na onye nwe ulo nwere nmekorita nke ha na ibe ha na isi okwu nke 'a deal is a deal'. Anyị na-akwado ịgwa ibe anyị okwu ma na-ele ohere. Onye nwe ulo na onye nwe ulo nwere ike ihu onwe ha n’oge ndi a. Ọ bụ ezie na onye nwe ụlọ enweghị ego n'ihi mmechi ahụ, mmefu nke onye nwe ụlọ na-aga n'ihu. Ọ bụ maka mmasị onye ọ bụla na azụmaahịa abụọ a lanarịrị ma merie nsogbu a. N’ụzọ a, onye nwe ụlọ ahụ na onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ikwenye na a ga-akwụ ụgwọ mgbazinye nwa oge na nke obere ka a ga-ejide ụkọ mgbe a ga-emepe ụlọ ọrụ azụmaahịa ahụ. Anyị ga na-enyerịtara ibe anyị aka ebe ọ bụla enwere ike, yana ọzọ, ndị nwe ụlọ anaghị erite uru n'aka ndị na-akwụ ụgwọ ego. E kwuwerị, ọ dịghị mfe inweta ụlọ ọhụrụ na oge ndị a. Ihe ọ bụla ị họọrọ, emela mkpebi ọkụ ọkụ ma ka anyị nye gị ndụmọdụ gbasara ohere ị nwere.
N'ihi na ọnọdụ dị ugbu a bụ nke a na-atụghị anya ya, anyị nwere ike iche na nke a nwere ike ịwelite ọtụtụ ajụjụ maka gị. Anyị na-elerukwu anya n'ihe ndị mere, anyị nwekwara obi ụtọ ime ka ị mara banyere ihe ndị na-eme ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara edemede a, biko egbula oge ịkpọtụrụ ndị ọka iwu nke Law & More.
Previous Post Enweghị ego ịrịọ arịrịọ
Next Post Mbinye aka dijitalụ na uru ya